शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ सपना सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ ! - हातेमालो डेली
शेरधनसंग बिवाह गर्ने लागेकी ज्याङ्मुको यस्तो रहेछ सपना सगरमाथा चढ्ने सपना यसरि फेल भएको रहेछ !
देश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूभन्दा २५ वर्षभन्दा बढी उमेर अन्तर भएकी ज्याङ्मु एन शेर्पासँग विहे गर्न लागेका छन्। ५० वर्षिय राईले आगामी माघ ११ गते २३ वर्षिय शेर्पासँग विवाह गर्न लागेका हुन्। सन् २०१८ की ‘मिस मंगोल नेपाल’ समेत रहेकी शेर्पा तत्कालिन समयमा मिस मंगोल नेपालमा सहभागी हुन आउँदा १९ वर्ष हाराहारीकी थिइन्। ‘मिस मंगोल नेपाल, मिस ई-कलेज प्रतियोगितामा भाग लिन आउँदा ज्याङ्मु शेर्पा करिब १९ वर्षकी थिइन्’, आयोजक सिजन मिडियाका प्रमुख प्रदीपराज वन्तले भने, ‘अहिले त्यहीँ २२-२३ वर्षभन्दा बढी भएकी छैनन्।’
Previous articleपतिको ज्यान लिएर शव लुकाउन खोजिन्, नसकेपछि गरिन् देह त्याग
Next articleजनतालाई निर्णायक बनाएर मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुनसक्ने : मन्त्री ज्ञवाली